Ereyada kor ku xusani waxay ka mid ahaayeen, maansadii Dhalanteed ee soo baxday bishii Maarso sanadkii 2004ta. Xilligaas waxaa xeradii Doofaarrey ee waddanka Kenya lagu shirinayay kooxo ay hormuud u ahaayeen qabqableyaashii dagaalku. Maansadu waxay si aad ah uga digeysay, cawaaqibxumada ka dhalan kartay haddii aysan dadka Soomaaliyeed dhaqso ugu baraarugin dhagartii lala maagganaa, aayahoodana ay ku aaminaan Itoobiya, Kenya iyo adeegeyaal ay iyagu soo aruursadeen.
Nasiibdarro, shirqoolkii Doofaarrey shartii laga dhaxlay shaahid ayaa loo wada ahaa oo iskaga sheekeyn meyno. Waxaase maanta taagan arrin shiiqisay shiddooyinkii la soo maray shantii sono ee la soo dhaafay, taasoo ah shaxda cusub iyo sheegashooyinka ay Kenya ku soo hunguriyaysay dhulbadeed Soomaaliyeed oo baaxaddiisu ay gaareyso 38000 km2 , sida ku cad cilmibaaris lagu kalsoonyahay oo ay sameysay Somalitalk.com.
Gabayga Dhaxalwareeg oo soo baxay 11 April 2009, wuxuu mar kale ka digaayaa khatarta cusub ee soo foodsaartay ummadda Soomaaliyeed. Haddaan shalay maqleynay dhul keenna ah oo uu gumeysigii Ingiriisku ku wareejiyay Kenya iyo Itoobiya, maanta waxaan u joognaa baddii Soomaaliyeed oo qaar ay soori-qaadday Soomaalina sheeganayaa ay horteenna ku saxiixayaan, Saatirku ha naga samatabixiyee. Haddaan horey uga maqalnay shaqsi mas’uul Soomaaliyeed sheeganaya in la baabi’inayo xadka Soomaaliya iyo Itoobiya, hal baasaboorna la qaadanayo, maantana waxaan ka maqalnay mid kale oo mas’uuliyad sheeganaya in uusanba jirin xad u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya (dhinaca badda). Haddii arrinku uu sidaan ku sii socdana, berri waxaa dhici doonta iney soo baxaan dad ku doodaya in wax dhul Soomaaliyeed la yiraahdaba uusan jirin, sida maantaba ay qaar ugu doodayaan in ay wax Soomaali la yiraahdo aysan jirin.
Halkaan ka akhri maansadii DHALATEED
Halkaan ka akhri maansadii DHAKAFAAR
Halkaan ka akhri gabaygii WAAJIB
Faafin: SomaliTalk.com | April 12, 2009